साम्राज्ञीको विकिनी फोटो बन्यो भाइरल – SajhaPana
साम्राज्ञीको विकिनी फोटो बन्यो भाइरल
साझा पाना २०७६ साउन ५ गते १२:४० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नायिका साम्राज्ञी आरएल शाह अहिले फुर्सदमा छिन् । उनी ‘मारुनी’ र ‘रातो टिका निधारमा’को छायांकन सकिएपछि बालीमा प्रेमीसँग घुमघाम गरिहेकी छिन् । उनको केहि दिन अगाडी विकिनीको फोटोले मिडिया छाएसँगै साम्राज्ञी र प्रेमीको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ ।
साम्राज्ञी यतिबेला इन्डोनेशियामा छिन् । इन्डोनेशियाको बालीमा उनी आराम गर्न पुगेकी हुन् । २ चलचित्रमा लगातार काम गर्दा थकित महशुश गरेको भन्दै उनले आराम चाहेको बताएकी थिइन् ।
तर, साम्राज्ञी एक्लै बाली पुगेकी भने होइनन् । उनी, आफ्ना प्रेमीसँग बाली पुगेकी हुन् । तर, यतिबेला साम्राज्ञीको केही तस्वीरले सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भोगिरहेको छ । प्रेमीसँग मस्ती मुडमा रहेकी साम्राज्ञीको केही अन्तरंग तस्वीर सार्वजनिक भएका छन्, जसले उनको आलोचना भैरहेको छ ।
प्रेम सम्बन्ध, टाटु र तस्बिरले साम्राज्ञी चर्चामा आउँदा धेरैले भने साम्राज्ञीलाई सम्झाउने व्यक्ति नभएको धारणा छ । अब साम्राज्ञीलाई सम्झाउने व्यक्ति नभएका हुन् या साम्राज्ञी नसम्झिएकी हुन्, त्यो उनै जानुन् । तर चल्तीको कलाकारले सामाजिक उत्तर दायित्व बहन गर्दै आफ्ना क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्नु पर्ने फिल्मकर्मी स्वंयम पनि बताउँछन् ।
ट्याग : #साम्राज्ञी
सेक्स गर्दा महिलाहरु किन कराउँछन् ?
स्ट्रोक के हो, किन हुन्छ र यसबाट कसरी बच्ने?
सपनामा के देख्दा धन तथा पद प्राप्त हुन्छ ?
विपश्यना ध्यान “एक सुखद् अनुभूति “